Akhriso:- Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Guriceel | Allbalcad Online
Home WARARKA Akhriso:- Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Guriceel
Waxaa weli xiisad dagaal ay ka taagan tahay degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, halkaas oo ay isku heystaan Ciidamada dowladda & kuwa Galmudug oo dhinac ah iyo xoogaga Ahlusunna Waljamaaca.
Badi dadkii kunoola Guriceel ayaa isaga barakacay, halka weli kuwa tirada yar ee ku sugan ay barakacayaan, iyaga oo ka cabsi qaba in dushooda lagu dagaalamo, isla markaana ay waxyeelo kasoo gaarto.
War Goordhow na soo gaaray ayaa waxaa ay sheegayaan in jugta tiro madaafiic ah laga maqlay duleedka degmada Guriceel gaar ahaan aaga waqooyi ee Degmada Guriceel oo ay isku hor-joogaan Ciidamada Dowlada Federaalka iyo kooxda hubeysan ee Ahlusunna.
Dad ku sugan Guriceel ayaa Risaala u sheegay inay maqeen jugta tiro madaafiic ah, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in xoogaga Ahlusunna ay rideen madaafiicda kuna dhaceen meel u dhow fariisinka Ciidanka dowladda & kuwa Galmudug.
Dhawaan waxaa fashilmay waan waan laga dhex-waday Mas’uuliyiinta Maamulka Galmudug iyo xoogaga Ahlusunna, kuwaas oo ay wadeen Odayaal iyo siyaasiyin kasoo jeeda Galmudug, waxaana dadka ay ka cabsi qabaan in uu dagaal dhex-maro Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo dhinac ah iyo xoogaga Ahlusunna.
Previous articleCiidanka DANAB & kuwa Jubbaland oo howlgal Wadajir ah sameeyay
Next articleMid kamid ah dalalka Yurub oo aqbalay in lagu tago Baasaboorka Somalia